Vola ampiasain'ny kandidà amin’ny fampielezan-kevitra. Avy aiza ny loharanon’izany ? - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 23 Oktobra 2018 ao amin'ny Hetsika,
Dimy andro izay no nanombohan’ny fampielezan-kevitra na dia efa tany amin’ny volana janoary tany aza no efa nanomboka ny hetsika mialoha-fampielezan-kevitra ho an’ireo kandida sasany. Tsikaritra fa mitovy amin’ireo fifidianana hatramin’izay ihany ny fomba fanao fa toa tsy miova. Elikoptera, t-shirt, kasikety, lambahoany, fahitalavitra goavana sy mpanakanto hatrany no ambetin-dresaka. Miraradraraka ny vola ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra ary hita miarihary fa tsy mitovy izany ho an’ireo kandida 36. Amin’ny maha fiarahamonim-pirenena an’ny TI-IM mirotsaka amin’ny fampivoarana ny mangarahara, ny tamberin’andraikitra ary ny fahitsim-pitondratena eo amin’ny seha-piarahamonina rehetra dia mitonona ampenetre-tena ho mpitondra –tenin’ny vahoaka izahay amin’izao hetsika ho an’ny fangaraharana ara-bolan’ny kandida mirotsaka ho filoham-pirenena izao.
Tianay ny mampahafantatra fa nisy ny fanontaniana an-tsoratra nangatahany am-panajana tamin’ireo kandida mba ho fenoiny, momba ireo loharanombola ampiasain’izy ireo amin’ny fampielezan-kevitra sy tamin’ny hetsika mialoha ny fampielezan-keivtra. Manan-jo sy tokony hahafantatra ny teti-bola ankapobeny ampiasain’ny kandida mirotsaka ho fidiana tokoa ny olom-pirenena tsirairay. Izany indrindra no antony nanatontosana izao hetsika izao. Mangetaheta hahafantatra ihany koa izy ireo hoe : ezaky ny tenenany manokana ve sa vola hindrana, sa lova, sa vola nangonina manokana sa hafa izany vola ampiasaina izany. Ho avoakan’ny TI-IM avy hatrany amin’ireo lalan-tserasera samihafa, indrindra ny tranokalam-pifandraisana moa ny andinindininy amin’izany vao voahangona.
Sadasa ny lalam-pifidianana, fa indrindra ny lalàna mifehy ny fangaraharan’ny vola ampiasaina amin’ny fampielezan-kevitra. Manoloana izany, manentana ny olom-pirenena tsirairay ny TI-IM mba handinika lalina sy akaiky ny toetra amam-pihetsiky ny kandida tsirairay, ary hametraka ny safidiny amin’ny singa maripototra kokoa ka hahay hifidy am-pieritreretana lalina amin’ny androm-pifidianana. Fantatra fa andry voalohany iankinanan’ny fahaizam-mitantana ny fametrahana fangaraharana ary sahy mino sy manantena ny TI-IM, miaraka amin’ny olom-pirenena fa ho sahy hamaly ireo fanontaniana tsotra napetraka tamin’izy ireo ihany koa ireo kandida rehetra.
Antananarivo, faha 12 Oktobra 2018